यौनसम्पर्क गर्न मन लाग्दैन ? यौन जीवनको आन्नद लिन यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /Intresting/यौनसम्पर्क गर्न मन लाग्दैन ? यौन जीवनको आन्नद लिन यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
यौनसम्पर्क गर्न मन लाग्दैन ? यौन जीवनको आन्नद लिन यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
एजेन्सी। यौन जीवन रोमान्टिक बनाउनको लागि तपाईंले धेरै कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्छ । धेरै पटक तपाईंको जीवन यस्तो हुन्छ कि तपाईंको यौन साथीले यौनसम्पर्क राख्न मान्दैन वा लाज मान्ने गर्दछ।
यौनको लागि सहमत नहुने थुप्रै कारणहरू हुन सक्छन्, जुन कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । तपाईंसँग तपाईंको यौन साथिले यौनसम्पर्क गर्न मान्दैन तब तपाई के गर्नुहुन्छ ? सामान्यतया जब तपाई आफ्नो केटी साथिलाई सम्बन्ध राख्नको लागि अनुरोध गर्नुहुन्छ । यदी उ तपाईंसँग खुःशी छैन भने उसमा जलन, टाउको दुख्ने, रिस उठ्ने , तनाव हुने जस्ता भावना उत्पन्न हुन सक्छ। यस्तो अबस्थामा त्यस्तो भावनालाई हटाउन प्रयास गर्नुहोस् ।
यौन जीवनको आन्नद कसरी लिने:
सुत्ने कोठमा उज्यालो बत्ति
यौन विशेषज्ञका अनुसार एकअर्काको शरीर मालिश गर्ने गर्नाले यसको माध्यमबाट, रोमान्सको भावनाहरू बढाउन सकिन्छ । बेडरूममा उज्यालो बत्ति सम्भव हुन्छ भने मैन बत्ति बाल्नु राम्रो मानिन्छ । आफ्नो साथिको शरिरलाई मालिस गर्दै समधुर संगीत पनि बजाउँने गर्नुहोस् । यसो गर्नाले तपाईंको साथिलाई यौनइच्छा पैदा हुनसक्छ र तपाईंले यौन आन्नद लिन सक्नुहुन्छ वा दिनसक्नुहुन्छ ।
यौनसम्बन्धको लागि तयार हुनु पुर्व हल्का मनतातो पानीले नुहाउँनुहोस् । अनि कोठालाई सफा र चिटिक्क पार्नुहोस् ।तपाईं सुत्न जाने बेलामा तपाईंको कोठाबाट बास्ना आउँनुपर्दछ । तपाईंको कोठा फोहोर हुनुहुँदैंन । फोटोहरुलाई पनि सजाएर राख्नुहोस् । कत्तिपय मानिसहरुमा अश्लील चलचित्र देखाएर उत्तेजित पार्न सकिन्छ भन्ने भ्रम छ वास्तवमा त्यो सत्य भने होइन ।
खुल्ला रुपमा आफ्ना समस्याहरुलाई प्रेमका साथ कुरा गर्नुहोस् । तपाईंलाई मनपर्ने निर्णय गर्नुहोस्। तपाईंको साथिको भावनाको पनि ख्याल गर्नुहोस् । उसको विचारलाई बुझ्नुहोस् । उसका पुराना सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्नुहोस् । तपाईंले के कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ भने तपाईंको साथिलाई तपाईंसँग बस्दा रमाइलो लाग्नुपर्दछ ।
घट्यो आज चाँदीकाे मूल्य, आज सुनको मूल्य स्थिर